Sababaha Ugu Waawayn Ee Looga Dalbo La Taliye Sharci Garyaqaan | Shirkadaha Sharciga ee Dubai
Sababaha ugu Waaweyn ee Loogu Doonayo La-talin Sharciyeed Qareen
xirfad yaqaan sharci
La hadal qareen
Miyaad jeceshahay inaad ogaato sababta ay tahay inaad qareen uga doonato UAE sharci yaqaan? Dad badani waxay diidaan fikirka kaliya ee ah inay la shaqeeyaan qareen sababtoo ah waxay dareemayaan inay sidaas samaynayaan inay u horseedi doonaan kharashyo badan qaybtooda.
khilaafaadka ganacsiga, khilaafaadka, dacwadaha, arrimaha qoyska
Naftaada ka fogoow walwal sharciyeed
In kasta oo dhammaan arrimaha sharciga aysan u baahan karin adeegyada qareenka, xirfadyahankan sharciga ah ama qareen ayaa door muhiim ah ka ciyaara sidii loo joojin lahaa dhibaatooyinkaaga.
Qareenka wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa sidii loo joojin lahaa dhibaatooyinkaaga
In kasta oo aysan raqiis ahayn in aad qabsato qareen wanaagsan ama u doode gudaha Dubai ama UAE, waad ku xisaabtami kartaa iyaga inay kaa caawiyaan naftaada inaad iska ilaaliso walaacyo sharciyeed oo adag sida sheegashada dhaawaca, khiyaanooyinka caafimaadka, khilaafaadka ganacsiga, khilaafaadka, dacwadaha, kiisaska khayaanada. , sheegashooyinka caymiska, racfaanka, damiinashada, muranka kirada, furriinka iyo haynta ilmaha.
Hoos waxaa ku qoran qaar ka mid ah sababaha ugu wanaagsan ee sababta qareenka sharci-ka-raadinta ah ee Dubai uga raadsado qareen macno samaynaya
Sharciga UAE wuxuu ubaahanyahay tarjubaan xirfad leh.
Ilaa aad adigu ahayn qareen tababbaran ama lataliye xagga sharciga ah, waxaa ugufiican inaad u gudbiso howsha tarjumaada sharciga khubarada oo aad ka fogaato inaad u dhaqmayso sidii oo kale. Kaliya sidaa waad ogtahay, xitaa qareenada inta badan khibrad u leh waxay sidoo kale raadsadaan talo qareenada kale marka ay ka hadlayaan arrimaha sharciga.
Dhanka kale, inaadan raadsanin adeegyada la taliyayaasha sharciga UAE marka la qorayo qandaraasyada, bilaabaya ganacsi cusub, ama wax ka qabashada walaacyo kale oo suuragal ah oo la soo gudboonaata waxaa laga yaabaa inay kuu horseedaan caqabado haddii kale laga fogaado.
Qareenada ayaa ku xeel dheer cadaymaha adag.
Waxaa jira waqtiyo ay kooxaha dacwad-qaadayaashu jidkooda uga baxaan inay si aan habooneyn isu urursadaan cadaymaha kaa dhanka ah. Markhaatiga marqaatiga ee qofka gaarka ahi wuxuu ku dambayn karaa is burinaya bayaan hore loo sheegay. Tani waa halka khibrada qareenkaaga ee qareenkaaga uu ku yimaado si habsami leh maadaama isagu ama iyadu ay ku dhex mari karaan caddeynta oo ay xaqiijin karaan xaqiiqada.
Waxaad badbaadin kartaa lacag badan haddii aad raadiso la-talin sharci oo qareen ah.
Kiisaska madaniga ah waxay dhaawici karaan dhaqaalahaaga ama waxay kaa caawin karaan inaad lacag badan hesho. Markii aad shaqaaleysiiso qareen xilliyeed, waad hubsan kartaa inaad ku guuleysan doonto dacwadaada, ha ahaato heshiis furriin, caymiska sheegashada, sheegashada shilka, khaladaadka caafimaad, ama sumcad xumada. Sidoo kale, waxaa wanaagsan in la ogaado in qareeno badan oo madaniga ah aaney soo dallacayn ujro ilaa kiiska lagu guuleysto mooyee.
Baro dadka muhiimka ah ee ku jira wareegga sharciga.
Qareenada waxaa lagu yaqaanaa xiriirkooda ballaaran ee khubaro ku takhasusay arrimaha sharciga kuwaas oo awood u yeelan doona inay kaa caawiyaan arrintaada la tashiga sharciyeed ee habboon, oo ay ku jiraan markhaatiyaasha khabiirada iyo baarayaasha khaaska ah. Waxay la falgalaan oo ay ula shaqeeyaan dadkaan si joogto ah. Waxay kaloo ka shaqeyn karaan 24/7 si loo hubiyo inaad ku guuleysan doonto dagaalkaaga sharciyeed.
Qareenada waxay ula tacaali karaan dhammaan habraacyada sharciga sida saxda ah.
Haddii aadan wax tababar ah ku lahayn laanta sharciga, waxaad la kulmi kartaa dhibaatooyin lasocoshada habraacyada lagama maarmaanka u ah sida loo fayl gareeyo dukumiintiyada sharciga ah. Daahidda xitaa dhowr daqiiqo ama xareyn qaldan ayaa khalkhal gelin karta dacwada oo xitaa gebi ahaanba ka dhigi kartaa mid guuldaraystay.
Kuwani waa qaar ka mid ah sababaha ay tahay inaad u doonato talo qareen sharci yaqaan ah. Akhbaarta wanaagsan ayaa ah in qareeno badan oo UAE ah ay bixiyaan latalin sharciyeed bilow ah oo bilaash ah markaa dhib ma leh inaad mid la hadashid.
Naftaada Ilaali, Qoyska, Asxaabtaada, Saaxiibadaada
Si fudud ayey macaamiisha caalamiga ahi u yihiin